Na-arụ ọrụ faịlụ ọdịdị na AutoCAD - Geofumadas
Arụ ọrụ na AutoCAD udi files
Jenụwarị, 2009 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Microstation-Bentley
Faịlị na-akpọkwa, nke a maara dị ka faịlụ .shp ga-adị usoro nhazi n'ihe gbasara teknụzụ mana anyị enweghị ike izere na e mepụtala ha dịka ArcView 3x dị. Nke a bụ ihe kpatara eji eji ha eme ihe n'ọtụtụ ebe, ruo n'ókè nke na ọtụtụ nyiwe geospatial amalitela usoro iji soro ha rụọ ọrụ. Gụnyere gvSIG nwere ike gụọ ma dezie ha.
Uzo eji eme otutu ebe tupu ebuputa site na ESRI rue dxf, ya na oghom nke ida ihe ntinye. N'okwu a, anyị ga-ahụ otu esi emekọrịta ndị a velociraptors eji AutoCAD Map AutoCAD, m mụtara banyere usoro a site nzaghachi nro site na Txus na Cartesia forum.
1. Ọbụghị naanị AutoCAD ọ bụla
Ederede faịlụ emepụtara na geometry, nke dị na .shp faịlụ ndọtị, mgbe ahụ data tabular dị na faịlụ .dbf yana ndebiri na-ejikọta ya na .shx.
Iji gụọ faịlụ nke ndị a chọrọ Map AutoCAD, ma ọ bụ Civil 3D; Ọ bara uru ịkọwa nke ahụ n'adịghị ka Bentley Map gvSIG enweghị ike ịgụ faịlụ natively mana enwere ike ị nweta ya site na njikọ FDO.
Ihe m na-eme na AutoCAD Civil 3D 2008.
2. Importing .shp faịlụ
Iji mee nke a, ị ga - eme ya na menu:
"maapụ / ngwaọrụ / mbubata", ebe ị nwere ike họrọ faịlụ abụọ .shp na E00 na ọbụnadị cops si na ọrụ ArcInfo mbụ.
Ọ na-enye ohere mbubata site na mmemme dịka Mapinfo (.mif .tab) na Microstation Geographics (.dgn). Ọ dị m ka mmeghe nke AutoCAD dị mma na usoro ndị mba ọzọ, n'ihi na mgbe ị na-ebubata site na dgn n'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume ijide mslink na usoro ndị ọzọ dị ka ị na-erigbu ihe dị mgbagwoju anya na ịtụgharị mkpụrụ ndụ iji gbochie ya ozugbo.
Mgbe ahụ ngalaba ahụ rịọrọ ka ekenye ntule ya na ohere ibubata naanị otu mpaghara.
Ọ ga - ekwe omume ịkọwa ma a ga - agbanwe polygons ahụ na polylines ndị mechiri emechi.
3. Na-ebupụ .shp
Mbupụ usoro a yiri, "map / ngwaọrụ / mbupụ", mgbe ahụ mbupụ ga-eme iche iche, ahịrị, isi, polygons na ederede. Enwere ike iji aka mee nhọrọ ahụ, site na ọkwa ma ọ bụ site na klaasị atụmatụ ma ọ bụrụ na ịkọwapụta topologies, ọ ka mma.
Ọ dịkwa mkpa ịkọwapụta njirimara nke ihe ndị ga-ewu kọlụm dbf, ntule nke faịlụ mmepụta yana ntụgharị nke polylines ndị mechiri emechi.
N'okwu a banyere ibubata na mbupụ, enwere ụzọ ọzọ maka ịmepụta profaịlụ ka ọ ghara ịkọwapụta ọnọdụ niile oge a, a ga-echekwa nke a dị ka faịlụ .ipf nke nwere ike ibudata oge ọ bụla usoro a ga-eme.
ArcView AutoCAD Map Bentley Systems obodo 3D DGN ESRI gvSIG oS shp
Previous Post«Previous Geo5 Software maka usoro ala
Next Post Ịmepụta Google Earth 5.0Next »
14 Na-aza "Na-arụ ọrụ ọdịdị faịlụ na AutoCAD"
Miguel 2 kwuru, sị:
July, 2017 na
Ezigbo ehihie, enwere m ajụjụ.
Emeghewo m faịlụ .shp na AutoCad Civil 2008, nke si na nnukwu mpaghara nwere ọtụtụ ngwugwu dị iche iche.
1.- Ọ bụrụ na achọrọ m ịma ala nke atụmatụ, Civil na-agbanye ya n'ebughị nsogbu, ma ọ bụrụ na mhọrọ abụọ ma ọ bụ karịa, elu ahụ pụtara m dịka * VARIOUS *. Enwere ụzọ maka Cad iji mee ego?
2.- N'okpuru atụmatụ ndị a, n'ọtụtụ ọnọdụ enwere ihe karịrị otu ụdị ihe ubi n'ime (osisi vaịn na osisi almond). Enwere ụzọ ọ bụla nke ike ịmebi nkata ahụ n'ime ogige ma nyeghachi m ala nke ebe ahụ?
ị egeomates kwuru, sị:
Ike, 2017 na
Nju Gaghị enwe ike iji map AutoCAD dezie otu ụdị, jikọta ya naanị. Nwere ike idezi ya na qgis ma ọ bụ arcgis ọ bụla, ha dị mfe iji rụọ ọrụ.
Miguel kwuru, sị:
Ọ ga-amasị m ịmata ma Autocad Map na-enye ohere ijikọta ụdị abụọ (nke nwere otu mpaghara okpokoro) n'ime otu. Iwu isonye na-agbakwunye mkpụrụ ndụ tebụl, mana ha na-emegharị ha n'agbanyeghị na a na-akpọ ha otu ...
Akele na ekele tupu oge eruo
amaghị aha kwuru, sị:
August, 2015 na
AHỤGHỊ OKWU OKWU !! M GA-ACHỊ ỊMA ỌTỤTỤ MGBE M GA-AHỤRỤ MGBE IWU EKWU AGBANYE MUNICIPALITY? BỤ oge mbụ. ỤBỤKWỤKWỌ NA-AHỤ N'ỤLỌ BỤ Ọ BỤ BỤ BOLIVARS. KWA M?
miguelangel kwuru, sị:
June, 2015 na
Onye ọ bụla mara ma ọ bụrụ na e nwere iwu ọ bụla ma ọ bụrụ na faịlụ dwg nọ na 3d, à ga-ebupụ ya na ụdị 3d nakwa na 0d? Ọ bụrụ na arụ ọrụ a na iwu ziri ezi maka mbupụ gaa sig, ọ na-emepụta usoro niile dị na XNUMX.
Ike, 2014 na
Gbanwee ihe ngosi na eserese. Mmemme ọ bụla na-enwekarị ngwa mgbakwunye maka nke ahụ.
Fernando kwuru, sị:
Ana m achọ ụzọ isi si Autocad Map, Kosmo ma ọ bụ GvSig nweta ụfọdụ mkpado ka ha wee hụ ha na Autocad nkịtị.
lukas kwuru, sị:
June, 2011 na
Echere m na ọrụ nke ịkọwa ụfọdụ isiokwu na-akpali mmasị nke anyị na-amaghị bụ nke dị ukwuu, na-ekele gị maka oge na amamihe gị.
g! kwuru, sị:
April, 2010 na
Owl kwuru, sị:
Ọ bụ ezie na m na-aga na ebe nrụọrụ weebụ a mgbe niile, achọpụtaghị m post a ... yabụ otu afọ mgbe ọnwa 3 gachara, m na-ekwu, ọ bụ ezie na echere m na ị kwesịrị ịmaworị ebe a
Ọ dị mma na mbubata / mbupụ na Map AutoCAD .. peeeeeeeeero ihe «ziri ezi» bụ ịrụ ọrụ na shp na NATIVE FORMAT. M pụtara ... Ọ BTERLA!
Site na AutoCAD Map Task Pane (site na mbipụta 2007 elu) ị nwere ike ijikọ ozugbo na ebe nchekwa data dị iche iche (wms, oracle, wfs, raster na [oh!] Shp) ...
Naanị gaa Data / Jikọọ na data ma ọ bụ ya! Na-asọpụrụ dị ka faịlụ mbụ shp, ọ ga-ekwe omume ịkpọtụrụ, nyochaa, dezie na ihe niile ka dị na sp format..
Lee ihe oyiyi nke iwu ahụ na ajụjụ
Jenụwarị, 2009 na
Ekele m, emeela m mgbazi.
nsonye kwuru, sị:
Ị ga-agafe Autocad, ma jiri map nke Autocad (Gbanyụọ 3D na ya)
I nwekwara ike na-ezo aka njikọ FDO, nke ọ bụ ezie na anaghị m eji ya eme ihe, aghọtara m na ọ na-arụ ọrụ na faịlụ shp nwa oge, ọ dịghịkwa mkpa ibubata ya
ọ bụ gị njọ
Daalụ maka ọnụ. Etinyeworị m otuto ahụ.
Nwere ike isi na isi mmalite nke a "chọta" ...
Usoro 3D Civil maka ọrụ obodo - ọkwa 4
Akara akara, mmiri nhicha, ngwugwu, ntanetị. Mụta imepụta atụmatụ na ọrụ linear na Autocad Civil3D sọftụwia etinyere ...